Vanotapudza | BLI Zvikoro zveMitauro muCanada
Mabasa evadzidziAirport Dhumhana
BLI inopawo nhandare yendege siya sevhisi. Iwe unogona kukumbira sevhisi ino panguva yekunyoresa kwako, kana kana uchida iwe unogona kuikumbira kana uchinge watosvika muMontreal.
Mabasa evadzidziKusvika panhandare yemhepo
Paunosvika kuairport, ita chokwadi chekutevera zviratidzo kuairport. Iwe unozofanirwa kuenda kuburikidza nePrayimari yeKufambisa Kunongedza nzvimbo yekutaura kune mukuru kubva kuCanada Border Services Agency (CBSA).
Apa ndipo pauchazoda kuona pasipoti yako, Letter Yekugamuchirwa, ruzivo nezve pekugara uye yako tiketi yemhepo yekudzoka kune yako nyika.
Kana iwe wakanyora bvumo yekudzidza nekuti uchave uchidzidza kwemwedzi inopfuura matanhatu, mvumo yako yekudzidza ichapihwa kana uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge wabvumirwa,